တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော ITခေတ် နည်းပညာပစ္စည်းများနှင့် ကလေးငယ်များအပေါ်လွှမ်းမိုးမှု | Myanmar Tech Press
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော ITခေတ် နည်းပညာပစ္စည်းများနှင့် ကလေးငယ်များအပေါ်လွှမ်းမိုးမှု
2018-01-08 2018-04-06 Admin နည်းပညာ
သင့်အိမ်မှာ ကလေးငယ်များရှိပါသလား။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရော video games များ mobile phones များ နှင့် အလုပ်ရှုပ်နေတတ်သော ကလေးငယ်များကို သင်သတိထားမိပါသလား။ ထိုကလေးငယ်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံကဲ့သို့ developing country မှာပင် နည်းပညာဟာ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် အလွန်အမင်း လွှမ်းမိုးထားပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ပါတယ်။
ယနေ့ ITခေတ်မှာ ရှင်သန်ကြီးပြင်းရမယ့်ကလေးငယ်တွေအတွက် နည်းပညာပစ္စည်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိရန်မှာ အရေးကြီးလှပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေဟာ ကမ႖ာလောကရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ််။ နည်းပညာဟာလည်း တနေ့တခြား တိုးတက်ပြောင်းလဲလာနေပါတယ်။ နောင်တချိန်မှာ ဒီထက်ပိုပြီးခေတ်မှီတဲ့နည်းပညာတွေကို ဒီကလေးတွေကပဲ ဖန်တီးကြမှာပါ။
ကလေးငယ်တွေ နည်းပညာနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့ ပစ္စည်းများစွာရှိပါတယ်။ အများစုကတော့ computer, laptop, smart phones, tablets, TV, Games စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုခေတ်ဟာ ကျွနု်ပ်တို့ငယ်ငယ်ကခေတ်နဲ့ လုံးဝကိုကွာခြားသွားပါပီ။ မူကြိုကလေးတစ်ယောက်ကို ဖုန်းတစ်လုံးပေးထားနိ်ုင်ပြီး မိခင်မှအချိန်မရွေး ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တဲ့ခေတ်ပါ။ဒါဆိုရင်် ကလေးငယ်များအပေါ် နည်းပညာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကို ကျွနု်ပ်တို့အနေနဲ့ မဖြစ်မနေ လေ့လာထားရတော့မှာပေါ့။ မိဘတွေဟာ မိမိတို့ကလေးတွေကို ITပစ္စည်းတွေနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ပေးသင့် မပေးသင့်ဆိုတာကို သိချင်နေကြမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
Image Source: https://www.techradar.com
Touch screen ၊ computer laptops ၊ လက်နှိပ်ခလုပ်လေးတွေပါတဲ့ game စက် စတာတွေဟာ ကလေးတွေရဲ့ မျက်လုံးနဲ့လက်ကို အတွဲညီညီအသုံးပြုတတ်စေပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ သူတို့ရဲ့ကျောင်းသင်ခန်းစာသင်ယူမှုမှာ များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ writing, drawing skills တွေကို သိသိသာသာတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။
Image Source: https://tecnojuega.com
IT ပစ္စည်းတွေနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့ကလေးတွေဟာ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း၊ စဉ်းစားတွေးခေါ် နိုင်စွမ်း ကောင်းကြတာတော့အမှန်ပါပဲ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာမြန်ဆန်ပြီး ဖျတ်လတ်တက်ကြွကြပါတယ်။ တခါတလေ သင်ဘယ်ကစပြီးဘာလုပ်ရမှန်း မသိတဲ့ game တခုကို ကလေးငယ်တစ်ဦးက လျင်မြန်ဖြတ်လတ်စွာ လုပ်ပြသွားတာကို သင်ခံရခက်စွာ ကြုံဖူးကောင်း ကြုံဖူးပါလိမ့်မယ်။
IT Applications ပစ္စည်းတွေဟာ မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ထုတ်လုပ်ဖန်တီးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် တီထွင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း နည်းသေးတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံမှာပေါ့။ instructions တွေ label တွေကနေတဆင့် foreign language တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် သင်ယူတတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်။
4. Intelligence and Commitment
IT Applications တွေမှာပါ၀င်တဲ့ Game တွေဟာ ကလေးတွေရဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ တဆင့်ပြီးမှတဆင့်တက်သွားရတဲ့အတွက် ကလေးတွေရဲ့ သိချင်တတ်ချင်စိတ် စူးစမ်းလေ့လာလိုစိတ် အလုပ်ပြီးမြောက်လိုစိတ်တို့ကို နှိုးဆွပေးရာရောက်ပါတယ်။ problem solving skill ကိုလဲ ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုး ဆင်းရဲပြီး အပြင်လောကမှာ ကမာ႖ပတ်ဖို့တော်ရုံမဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံက ကလေးတွေအတွက်တော့ Technology ဟာ နေ့စဉ်ဘဝမှာမတွေ့ရှိနိုင်တဲ့အရာတွေကို လွယ်လင့်တကူလေ့လာသင်ယူနိုင်ဖို့၊ ကမာ႖ကြီးကို အနီးကပ်တွေ့မြင်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးသောကြားခံနယ်ပါပဲ။ ဥပမာ တိရိစ္ဆာန်ချစ်တတ်တဲ့ ကလေးတယောက်ဟာ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ခွေးလေးကြောင်လေးလောက်ပဲ နေ့စဉ်ကြည့်စရာရှိတာမဟုတ်တော့ဘူး။ အာဖရိက က တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာကို ပုံနှင့်တကွ အချိန်ခဏအတွင်းလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
6. Social Interaction and Team Work
ကလေးတွေအနေနဲ့ သူတို့ဆက်သွယ်ချင်တဲ့ မိသားစုဝင်၊ သူငယ်ချင်းတွေဆီ IT devices တွေကနေတဆင့် အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ United States လို နိုင်ငံမျိုးတွေမှာဆိုရင် တချို့ကျောင်းတွေမှာ ကလေးတွေကို နည်းပညာဖန်တီးခွင့်၊ နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းခွင့်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာကလေးတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ Idea ကို Group ထဲမှာ ထုတ်ဖော်ပြောပြခွင့်ရကြပြီး တခြားကလေးတွေနဲ့ ပူးပေါင်းတိုင်ပင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရကြပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တော့ အလှမ်းဝေးနေပါသေးတယ်။
သတိထားရမှာတစ်ခုကတော့ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ဖြစ် တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာရှိပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ physical, psychological, neurological ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးမှုမပြည့်စုံသေးတာမို့ Technology ကို အလွန်အကျွံသုံးရင် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
Image Source: https://www.plusyourbusiness.com
Technology overuses ကြောင့် ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ကာကွယ်နည်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Image Source: http://www.jordantimes.com/news/features/lots-teen-screen-time-tied-obesity
TV, Video games တွေကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိုင်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် အဝလွန်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ အချိန်ကို limit လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အသက် ၂နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာ hand-held devices တွေကို လုံးဝအသုံးမပြုသင့်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ် (စကားပြောနောက်ကျတာ၊ စကားထစ်တာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်)။ အသက်၂- ၅နှစ်ကလေးတွေကတော့ တရက်ကို ၁နာရီပဲ သုံးသင့်ပါတယ်။ အသက် ၆နှစ်အထက်ကလေးတွေကိုတော့ သူတို့ရဲ့ daily living activities တွေ balance ညီမျှအောင် မိဘတွေကနေ ထိန်းညှိပေးသင့်ပါတယ်။ ကြာရှည်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါ Physical exercise အနေနဲ့ ပြေးလွှားဆော့ကစားတာကို မဖြစ်မနေလုပ်ခိုင်းသင့်ပါတယ်။
Image Source: https://www.healthxchange.sg/children/parenting-tips/tips-prevent-tech-addiction-children
ညအိပ်ရာဝင်တဲ့အချိန်မှာ အသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင် screen ကနေ ထွက်လာတဲ့အလင်းရောင်ဟာ အိပ်ချင်စိတ်ကိုပျောက်စေပြီး မျက်လုံးကြောင်ခြင်း၊ အိပ်ချိန်မမှန်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေကို အိပ်ရာထဲထိ IT devices တွေယူဆောင်ခွင့်မပြုသင့်ပါဘူး။ နေ့ဘက်အချိန်မှာသာ အချိန်ကန့်သတ်ပြီး သုံးစွဲစေသင့်ပါတယ်။
Image Source: http://ytimp3.live
Technology ကို အသုံးပြုမှုလွန်ကဲမယ်ဆိုရင် ကလေးတွေမှာ စိတ်အလိုမကျခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ အရွယ်မတိုင်ခင်စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုပျက်ပြားခြင်း၊ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုပျက်ပြားခြင်း၊ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်လွယ်ခြင်း စတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသနာတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့ IT devices တွေအသုံးပြုမှုကို လျော့ချပေးဖို့လိုနေပါပြီ။
ယနေ့ခေတ်မှာ မိဘတွေဟာ နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြရပါတယ်။ ကလေးတွေကို ဂရုစိုက်ချိန်နဲပါးပြီး IT devicesတွေနဲ့ အချိန်ကုန်နေကြပါတယ်။ မိမိကလေးတွေကိုလဲ IT devices တွေပဲ အလွယ်တကူပေးသုံးထားကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ ကလေးတွေဟာ စက်တွေကိုပဲပိုပြီးခင်တွယ်လာကြကာ Technology addiction စွဲလမ်းမှုပြသနာ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အခြားကလေးများနည်းတူ ကစားဖို့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာဖို့ မေ့လျော့လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် addition မဖြစ်ခင်တည်းက အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ပေးသုံးဖို့၊ ကလေးတွေရှေ့မှာ မိဘကိုယ်တိုင် အလွန်အကျွံမသုံးစွဲမိဖို့ သတိထားရပါမယ်။
May, 2011 မှာ WHO ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ cell phones, wireless devises တွေက ထုတ်လွှင့်တဲ့ ဓာတ်ရောင်ခြည်ဟာ များများခံယူမိမယ်ဆိုရင် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သုံးစွဲတဲ့အခါ အရမ်းအနီးကပ်မကြည့်ရန်၊ အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သုံးရန်၊ သုံးစွဲနေစဉ် မျက်လုံးကို မကြာခဏ အနားပေးရန် ကလေးတွေကို လေ့ကျင့်ပေးသင့်ပါတယ်။
Pediatric Occupational therapist တယောက်ဖြစ်တဲ့ Crist Rowan ကတော့ “ကလေးတွေဟာ ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့အနာဂါတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Technology အလွန်အကျွံသုံးစွဲတဲ့ကလေးတွေအတွက်တော့ အနာဂါတ်မရှိပါဘူး” လို့ ဆိုထားပါတယ်။ မှတ်သားစရာပါပဲ။ Technologyကို ကလေးတွေ စနစ်တကျ အသုံးချတတ်မှသာ Technology ရဲ့အသီးအပွင့်ကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နည်းပညာခေတ်မှာ ကျွနု်ပ်တို့ နည်းပညာကို မျက်ကွယ်ပြုထားဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နည်းပညာကို ထိတွေ့ခွင့်မရတဲ့ကလေးတွေဟာ တခြားကလေးတွေထက် နောက်ကျကျန်ခဲ့မှာ အမှန်ပါပဲ။ မိဘတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ရင်သွေးငယ်တွေနဲ့ နည်းပညာရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကြား မှန်မှန်ကန်ကန် ထိန်းညှိရင်း ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ အနာဂတ်ရဲ့ကြယ်ပွင့်လေးတွေ မွေးထုတ်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
Yi Lei Soe
နေပြည်တော်မှာ ဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်မယ့် နိုင်ငံတကာနည်းပညာပြပွဲကြီး
၁၅ဝဝကျပ်တန်ဆင်းမ်ကဒ်ခေတ်ရဲ့ လူထုကြားက IT ရေစီး
← Virtual Reality : စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ထက် ပိုလာပြီလား?
IT သမားကောင်းတစ်ယောက် ဘာတွေသိသင့်ဖို့လိုအပ်သလည်း ? →